Kuratidza zvinyorwa neelebheri kurwara
COVID-19 (chirwere che coronavirus 2019) chirwere chinotapukira chakakonzerwa neiyo coronavirus SARS-CoV-2 (yaimbonzi 2019-nCoV), iyo yakatanga kupararira muna Zvita 2019 kubva kuWuhan guta reChina. COVID-19 yakaziviswa seyakagadziriswa neWorld Health Organisation musi wa 11 Kukadzi 2020. Kubva musi wa25 Kurume 2020, pane zviuru gumi nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nemakumi matatu ezviuru, uye makumi maviri neshanu vakafa makumi maviri nevaviri. COVID - 614 yakatopararira kunyika makumi maviri nenomwe nenzvimbo. Musi waKurume 136, 28, mhaka nhatu dzekutanga dzeCCIDID-251 muCzech Republic dzinonzi dzakapfuura 133 pm CET. Kubva munaKurume 624, 19, makumi maviri nenomwe emakumi manomwe emakumi mairi, makumi maviri nematatu emhosva dzeCOVID-202 zvakasimbiswa muCzech Republic. Kubva munaKurume 1, varwere gumi nevaviri vakapora muCzech Republic, uye vanhu gumi nevaviri vakafa muCzech Republic.
Utachiona uye nguva yekuzvimba
COVID-19 chirwere chinotapukira. Hutachiona hunokwanisa kutapurirana kubva kumunhu kuenda kumunhu, huchizara nemadonhwe kana uchitsumwaira, nekukosora, kana kubata muviri. World Health Organization yakafungidzira kuti…
Maitiro Ekudzivirira Kupesana neCoronavirus uye Covid-19 Chirwere
Zviratidzo zvakajairika zvehutachiona zvinosanganisira zviratidzo zvekufema, fivha, kukosora, kupfupika uye kunetseka kufema. Mune zvimwe zviitiko zvakanyanya, hutachiona hunogona kukonzera pneumonia, chirwere chemuviri chakakomba chekufema, kutadza kwetsvo kana kufa.
Zviratidzo% Fever 87,9% Kuoma kukosora 67,7% Kuneta 38,1% Kuwanikwa 33,4% Kupfupika kwemweya 18,6% Muswe kana kurwadziwa kweropa 14,8% Kurwara kwehuro 13,9% Musoro weChimedu 13,6% Kurasikirwa. 11,4% Kushungurudzika kana kurutsa 5,0% Nasal rhinitis 4,8% Dhigiri 3,7% Haemoptysis 0,9% Conjunctival yakawedzera 0,8%
Ino saiti inoshandisa ruzivo kubva kune dzakasununguka kuwanikwa paInternet, senge masosi uye mafambisirwo enharaunda ehurumende hutano masangano, pamwe neredhiyo inovimbika. Pakutanga yakagadziridzwa maminetsi gumi, asi ikozvino miniti yega yega. Kunze kwehuwandu pachako, saiti yacho zvakare inosanganisira mepu inoshanda inoratidza kupararira kwehutachiona, chinongedzo ku account ye twitter, zano rekufamba, tsanangudzo yechirwere, uye ruzivo rwekugara pachezvaro.
Chii chinonzi Coronavirus? Iyo coronavirus nyowani (2019-nCoV) hutachiona (hwakanyanya coronavirus) hunowonekwa na…
Ski inotamira kunze kwekushanda nekuda kweiyo coronavirus COVID SARS 2019-nCoV
Panyaya yekuziviswa kwenzvimbo yeKushushikana neHurumende yeCzech Republic, nzvimbo dzose dzekushambidzira ski dzichakavharwa nemusi weMugovera 14 Kurume 3.
Ndinoziva sei kuti ndakabatwa neconavirus SARS 2019-nCoV COVID
Kuoma kukosora 67,7%
Kufema kwekufema 18,6%
Muswe kana marwadzo akabatanidzwa 14,8%
Maronda pahuro 13,9%
Kuzeya mbichana kana kurutsa 5,0%
Conjunctival Kuwedzeredza 0,8%
Ino saiti inoshandisa ruzivo kubva kune dzakasununguka kuwanikwa paInternet, senge masosi uye mafambisirwo enharaunda ehurumende hutano masangano, pamwe nenhau dzinovimbika. Pakutanga yakagadziridzwa maminetsi gumi, asi ikozvino maminetsi ese. Pamusoro pehuwandu, iyo saiti inosanganisirawo mepu inoshanda ..
Mepu ye coronavirus yakapararira COVID-19
Chii chinonzi Coronavirus? Iyo coronavirus itsva (2019-nCoV) hutachiona (zvakanyanya kunyanya coronavirus) inozivikanwa sechakonzera kubuda kwechirwere chekufema chakatanga kuwanikwa muWuhan, China. Pakutanga kwegore, varwere vazhinji mukubuda kwechirwere muWuhan, China inonzi yakave nehukama nemusika mukuru wepamakungwa nemhuka, zvichiratidza kuti yakapararira pakati pevanhu. Nekudaro, nhamba iri kuwedzera yevarwere vanonzi havana kuvhenekwa mumisika yemhuka, zvichiratidza kuti iri kupararira pakati pevanhu. Zita rekuti coronavirus rakatorwa kubva muchiLatin corona, zvinoreva kuti 'korona' kana 'halo', rinoreva hunhu ...
Ndeipi Folding @ Home purojekiti uye Foldit chirongwa
Masayendisiti kutenderera nyika arikutsvaga kurapa kweiyo coronavirus yeCOVID-19. Asi isu tese tinogona kutora chikamu mukugadzirisa dambudziko. Masayendisiti kubva kumayunivhesiti maviri eUSA vanobhejera kugadzirisa dambudziko rekoronavirus pamapurojekiti maviri akavezwa enharaunda kare ayo anenge chero munhu ane internet inobatana uye mamwe emakomputa anogona kutora chikamu. Sezvineiwo, chirongwa chega chega chinovimba nezano rakasiyana zvachose.
Chinangwa chemushonga weCOVID-19 ndechekudzivirira hutachiona kuti husabatike kumapapu. Masayendisiti saka anofanirwa kutevedzera nzira idzo protein inosunga. Iyo Folding @ Home purojekiti yakapa vaongorori compute simba pachikuva yayo yemakomputa makuru emumba. Iwe unogona zvakare kusanganisira yako.
Ipo chirongwa cheFolding @ Home, chakavakwa neStanford University masayendisiti, chinogadzirisa dambudziko nehutsinye uye inoda vashandisi veInternet chete simba ravo rakawandisa, kompikisano yeFoldit, iyo inowira pasi pepapiro reWashington Science uye Biochemistry Center…
COVID-19, coronavirus nyowani SARS-CoV-2
SARS-CoV-2, izere nyika taxonomic izita reSevere Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 [P 1] (yaimbonzi zita rechisimba zita rezita rekuti 2019-nCoV kana seWuchan coronavirus) iri RNA coronavirus inokonzera COVID-19 (COronaVIrus Chirwere) 2019), yakatanga kucherechedzwa mukupera kwa2019 muWuhan, China. Ino yava yechinomwe inozivikanwa vanhu coronavirus. Kuongorora kwakatevedzana kwakaratidza kuti hutachiona hwacho hukama neSarS-CoV, hutachiona hunokonzeresa SARS.
Vakuru veChinese vakazoita kuti vagare guta reWuhan, vachinetseka nekupararira kwehutachiona. Kubva 29 Chikunguru 2020, vanhu vanopfuura 2 900 vafa nekuda kwechirwere ichi uye vanopfuura 85 000 vakatapukirwa.
Kunze kweChina, chirwere ichi chakaitikawo mune dzimwe nyika dzinopfuura makumi matanhatu (kubva pa 60 Kukadzi 29), kusanganisira Czech Republic.
Musi wa31 Zvita 2019, Wuhan City Health Commission yakazivisa kuti kwaive nevarwere vakati wandei vane zviratidzo zve pneumonia yekusazivikanwa mavambo muguta. Vamwe vevarwere vaive vatengesi uye vatengesi pa…